Xildhibaannadii Mooshinka buray oo isku dayey iney fasiraan dib ula noqoshadoodii Mooshinka – Kalfadhi
Xildhibaannadii Mooshinka buray oo isku dayey iney fasiraan dib ula noqoshadoodii Mooshinka
December 23, 2018 December 23, 2018 Kalfadhi
Kulan ay maanta isugu yimaadeen qaar ka mid ah Xildhibaannadii Mooshinka ka keenay Madaxweyne Farmaajo ayaa looga hadlay sababahii keenay in ay la laabtaan Mooshinkii ay ku dalbanayeen inuu ku xil waayo Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xildhibaannadan, oo la baxay Kudlada Baarlamaanka ee Badbaado Qaran, ayaa kulankooda ka soo saaray dhowr qodob, oo ay ku fasirayaan dib ula laabashadooda Mooshinkaas, waxaana warbaahinta u aqriyay Xildhibaan Saleebaan Xaashi.
Waxa uu sheegay in ka noqoshadooda Mooshinkaas ay ku xireen shuruudaha kala ah joojinta waxay ugu yeereen “Faragalinta Golaha Shacabka” iyo ka hor tagista xaalado keeni kara xasilooni darro, joojinta faragalinta doorashooyinka ka jira dalka sida tan Puntland. “Waxaan ognahay waxa lagu sameeyay Doorashadii Koofur Galbeed intii ay socotay, haddana waxay dowladdu faraha kula jirta Doorasha Puntland” ayuu yiri Xildhibaan Saleebaan Xaashi oo war-saxaafadeedka aqrinayay.
Waxay ka digeen in dalka la keeno ciidamo aan ahayn kuwa hadda ka jooga AMISOM, taas oo ay sheegeen in ay tahay sharci darro iyo inaan laga tilaabsanin Golaha Sharci Dajinta ee Baarlamaanka Soomaaliya. Waxay sheegeen in sababaha xumeynaya ammaanka ay tahay iyada oo ay Xukumaddu ku mashquushay siyaasad oo kaliya.
Waxay dalbadeen in wax ay ku sheegeen “Xayiraadaha Saaran Golaha Shacabka” laga qaado, “si” bey yiraahdeen “uu uga doodo Miisaaniyadaha 2018 iyo 2019-ka”. Waxay sheegeen iney ka doodista Miisaaniyadahaas u baahan tahay waqti dheer. Si ay taas u dhacdo ayey dalbadeen inuu Guddiga Maaliyadda ee Goluhu sii wato kor-joogteyntiisa iyo baaritaannadiisa maaliyadeed. “Waxaan filayaa in dhamaan Golaha Shacabka iyo Guddiyadiisa loo madax-banayn doono, si loogu adeego Shacabka” ayuu yiri Xildhibaan Saleebaan Xaashi.
Kulanka Xildhibaannadan Golaha Shacabka waxaa si Wadajir ah u shir Gudoominayay Xildhibaan Sheekh Aadan Madoobe, Xildhibaan Saleebaan Xaashi iyo Xildhibaan Maxamad Jaamac, waxayna sheegeen iney wali taagan tahay sababihii keenay abuurista Mooshinkoodii buray.
Soo xulista Golaha Wakiillada Puntland oo wajigii labaad gashay
Golaha Aqalka Sare oo ku baaqay in loo gurmado dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii shalay
Maamulka Koonfur-Galbeed oo shaaciyay jadwalka doorashada Aqalka Sare
July 31, 2021 Hassan Istiila
Guddiga doorashada Koonfur-Galbeed iyo madaxweynah maamulka mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen, ayaa maanta shaaciyay jadwalka faah-faahsan...
Madaxweyne Farmaajo oo tababar Muqdishu ugu soo xiray saraakiil iyo saraakiil xigeen
July 31, 2021 July 31, 2021 Hassan Istiila
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo...
Koonfur-Galbeed oo soo saartay liiska xubnaha musharraxiinta Aqalka Sare
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, ayaa maanta soo saaray liiska xubnaha musharraxiinta ee...
Beesha caalamka oo soo dhoweysay hormarka laga gaaray hirgelinta heshiiskii doorashada ee 27-kii May
Jubbaland oo maanta soo gaba-gabeeysay wajiga koowaad ee doorashadda xildhibaannada Aqalka Sare